ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » G-Spot အမှန်တရားများနှင့်ဒဏ္ဍာရီ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 26 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင့်ရဲ့ G-spot နေရာချထားရန်ရုန်းကန်နေရ? ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူကျန်းမာလိင်ဘဝရှိခြင်းအပေါ်တံလျှပ်လိုက်ဖမ်းရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်သောအမြင့်မားအချိန်င်.
အလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် G-spot orgasm များအတွက်ရှာပုံတော်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှသိရသည်ဘယ်သူကိုဘို့အမျိုးသမီးသန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်. အမြိုးသမီးမြားစုံလင်သော clitoral orgasm ကြုံနေရ၏ကြားမှ orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ၏ဤပုံစံသည်အတောင့်.
ဒါဟာအမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ် orgasm အများအားဖြင့် clitoral ဆွတဆင့်အောင်မြင် orgasm ထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောဖြစ်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့င်; သို့သော်, အမျိုးသမီးအများစုအားဖြင့်ကြုံတွေ့ orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသဘာဝတွင် clitoral နေကြတယ်.
ဘာမှမမှားသာ clitoral ဆွတဆင့် orgasm ရှိခြင်းရှိင်နေစဉ်, ထိုဒဏ္ဍာရီညံ့လို့ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက် G-spot ရလဒ်များကိုနဲ့ဆက်စပ်နှင့်အများကြီးအောင်မြင်ရန်ရန်ပျက်ကွက်သောမိန်းမတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုကိုလျှော့ချ G-spot orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းပြောဆိုသော. ဒီမှာရယ်စရာအကောင်းဆုံးအရာသုတေသီများဆဲ G-spot ၏တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချမှုမဟုတ်သောကြောင့်.
G-spot သို့မဟုတ် Grafenberg အစက်အပြောက်ဂျာမန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုတယ်. Ernst Grafenberg, အဘယ်သူသည်ပထမဦးဆုံးလိင်အင်္ဂါအတွင်းဒီခေါ်ဆောင်သွားဇုန်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုသော, အ urethra နီးစပ်လမ်းကျော 1950 အတွက်. ပို 60 အကြံပြုချက်ဂျာမန်ဆရာဝန်ကဖန်ဆင်းခဲ့ကတည်းကနှစ်ပေါင်းပြီ, ဒါပေမဲ့ G-spot ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောသက်သေအထောက်အထားများရှိသေးရဲ့, ဒါကြောင့်ပဲဒဏ္ဍာရီရဲ့ယုံကြည်ဖို့အများကြီးအတင်းအဓမ္မသည့်.
တစ်ဦးက မကြာသေးမီကလေ့လာချက် ဆေးပညာဂျာနယ် Clinical ခန္ဓာဗေဒအတွက်နောက်ဆုံး G-spot ပတျဝနျးကငျြအဒဏ္ဍာရီသတင်းဌာနကြပုံရသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ. လေ့လာမှုအရအ, G-spot-stimulation သို့ orgasm ခွဲဝေ၏အယူအဆ, လိင်အင်္ဂါနှင့် clitoral လုံးဝမှားသည်. လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သုတေသီများကတစ်အမျိုးသမီးတွေခံစားရတဲ့ orgasm အမျိုးအစားအားလုံးကိုအသုံးပြုသင့်ကြောင်းတည်းသောသက်တမ်းကဆိုသည် “အမျိုးသမီး orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ”.
ယင်းကဆိုသည်လေ့လာမှုအတွင်းမှာတော့, sexologists ကွောငျးသိရဆီသို့ရောက် လာ. , “ပြည်တွင်းရေးအစေ့”, ယနေ့အထိသောအင်္ဂါဇာတ် orgasm ဖြစ်ပေါ်ယုံကြည်ခဲ့သည်, ့ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည်. အစေ့ပြင်ပကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုနှင့် orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာတဆင့်အမျိုးသမီးများကြီးမားပျော်မွေ့ပေးအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ; ဒါပဲ.
သငျသညျဦးနှောက်သောလူသားမြားရှိသညျအကြီးမားဆုံးလိင်အင်္ဂါသည်ဟုလူကြားရကြပြီရမယ်. ဒီလေ့လာမှုအသစ်လည်းအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုအကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်. လေ့လာမှုအရအ, အမျိုးသမီး orgasm အများအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ.
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့အင်္ဂါဇာတ် orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအပေါ်အခြေခံပြီးနီးပါးအမြဲကြောင်းတွေ့ရှိရ. ဒါကောင်းတယ်; ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေပိုပြီးရှုပ်ထွေးအလောင်းတွေရှိခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ကိုနားလည်ရန်ရှိသည်, သူတို့ကအလွယ်တကူယောက်ျားအဖြစ် orgasm ရှိသည်မဟုတ်နိုင်. ထို့အပြင်, သူတို့ပဲထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက်နေကြပါတယ်လို့ယုတ်ညံ့ခံစားရဘယ်တော့မှသင့်တယ်.
ဟုတ်ကဲ့, သူတို့ရဲ့ G-spot အကြိမ်အနည်းငယ်ထိရရှိပြီးနောက်သင်သည်သူတို့တွေ့ကြုံ orgasm အပေါ်စောင့်ရှောက်သောဟုဆိုလိမ့်မည်သူအမြိုးသမီးမြားတွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာမုသာစကားကိုမရစေခြင်းငှါ,; သို့သော်, ကျွမ်းကျင်သူများက G-spot ဆွအခြေခံအားဖြင့်သူတို့ရည်ရွယ်ဘဲခံယူပြင်ပဆွသကဲ့သို့အမျိုးသမီးများရိပ်မိသောအရာကိုယုံကြည်.
သငျသညျတူညီမခံစားရဘူးအဘယ်ကြောင့်သင်အံ့သြရပါမည်. ယခု, တစ်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုင်; အများဆုံးယုတ္တိရှင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ကွဲပြားခြားနားသောအလောင်းကောင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နှိုးဆွဖို့ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း.
တစ်ဦးထက်ပိုသိပ္ပံနည်းကျရှင်းလင်းချက်ရှိစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်အမှုအရာပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပါ. ပို. သငျသညျအနိမ့်သည်သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါလိမ့်မယ်; ဒါကြောင့်, ကိုယ့်လိင်အနားယူနှင့်ပျော်မွေ့.
5 အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူစုစုပေါင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်အမှတ် Check